Avy any Meksika hatrany Aostralia, miverina mandinika ny aterineto ho an’ny fitenin-dry zareo ireo tanora teratany · Global Voices teny Malagasy
Hira ka hatramin'ny TikToks, raisin'ireo tanora indizeny an-tànana ny aterineto
Voadika ny 19 Novambra 2021 8:04 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Português, Español, Français, Ελληνικά, Dansk, Esperanto , Română , नेपाली, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny volana Aogositra 2021)
Sary fanaingoana avy amin'i Isela Xospa, arovan'ny zon'ny mpamorona ary nahazoan'ny Global Voices alàlana.
Miisa 7.000 ireo fiteny misy manerana ny tany, saingy amin'ireo dia 10 monja no mibahana ny aterineto. Ny Anglisy no mitarika, amin'ny 25,9 isanjaton'ireo votoaty ety anaty aterineto, arahan'ny Shinoa, Espaniôla, Arabo, Portiogey, Indoneziàna, Frantsay, Japoney, Rosiàna ary Alemàna. Manoloana io zavamisy io, mandrafitra habaka ho an'ny fiteniny ety anaty tranonkala ireo tanora indizeny, manomboka any Meksika hatrany Aostralia.
Efapolo isantajon'ireo fiteny rehetra no tonga amina “fetra maha-tandindonin-doza” hoy ny UNESCO, ary ireo fiteny indizeny no tena tataovan'izany manokana, satria ireo fiteny mibahan-toerana no mameno ny fampianarana sy ny governemanta ary ny fampahalalambaovao manerana ny tany.
Tamin'ny 13 Jolay, nandritra ilay fifampiresahana an-tserasera niarahan'ny Global Voices sy ny First Languages Australia nikarakara, niaraka tamin'ny fanohanan'ny Masoivoho Aostraliàna ao Meksika, dia nifampizara tetikady ireo indizeny mpikatroka avy any Meksika sy Aostralia.
Misy fiteny indizeny miisa 68 ao Meksika ary 250 ao Aostralia, mahatonga ireo firenena ireo ho anatin'ny toerana tena manana fiteny marolafy indrindra eto an-tany, miaraka amin'i Papouasia-Nouvelle-Guinée, Nizerià, Indonezia, India ary Brezila, raha tsy hitanisa afa-tsy vitsivitsy.
“Firenena roa vokatry ny fanjanahantany sy ny fanerena hampiasa ny teny mibahan-toerana i Aostralia sy Meksika,” hoy ilay mpandrindra ny hetsika, Isela Xospa, indizeny Nahua mpanao fanaingoana. Ho azy, ity toedraharaha ity dia mitarika ho amin'ny fahitàna sy fahatakarana ny tontolo ao anatina fiteny tokana monja, izay midika fahavoazana goavana.
“Tena zavadehibe ny fahatakarana hoe ny aterineto dia ireo fiteny manjakazaka no mibahan-toerana ao aminy. Azonao atao ny miditra amin'ny aterineto raha toa ianao mahay ilay fiteny manjakazaka, fa tsy amin'ny fiteninao anao manokana,” hoy izy. Tohanany ny hoe io no iray amin'ireo antony mahatonga ireo tanora tsy hahita ny tenany eny anaty tambajotra ary mety hamela ny fitenin-dry zareo.
Niarahan'ireo mpandray fitenenana niaiky fa zara raha mampiasa ny tenindrazany ireo tanora, indrindra noho ny tsy fisian'ny fifampikasohana amin'ireo zokiolona. Ireo ray aman-dreny tsy mahay, na matetika tsy mampianatra ny tenindrazany amin'ireo zanany, mamela ny andraikitra ho an'ireo dadabe sy nenibe, raha mbola eo ry zareo.
Nanazava i Joaquín Yescas Martínez, lehilahy iray avy amin'ny foko Zapoteco Xhidza any Oaxaca, Meksika: “Marobe ireo ray aman-dreny no matahotra sekoly; nosaziana ry zareo [noho izy ireo niteny ny tenindrazany] fony ry zareo mbola kely tany an-tsekoly. Noho izany tahotra rehetra izany, marobe be ireo mpiray kilasy tamin'ny androko no tsy nampiasa ny tenindrazany.”
Ny fametrahana ireo teny indizeny ho hita bebe kokoa amin'ny aterineto dia mety hitàna anjara toerana iray amin'ny fisarihana ny tanora hianatra, hampiasa azy, ary hanary ny henatra tsy nitenenany ny tenindrazany.
“Rehefa afaka mahita sy mandre ny tenindrazany eny anaty tambajotra sôsialy malaza ireo tanora, ary zaraina sy atao azo idirana ety anaty aterineto, dia mandrisika an-dry zareo izany mba hitady azy ireny sy hizara ny teniny ary ny kolontsainy,” hoy i Annalee Pope, vehivavy Wakka Wakka avy ao Queensland Afovoany, Aostralia.
Kanefa, tsy resaka fotsiny momba ny fampiasàna ireo fiteny indizeny eny anatin'ireo sehatra malaza anaty aterineto, fa koa momba ny fakàna sary an-tsaina ireo vaovao mba hitompoan-dry zareo ny aterineto. Ohatra, i Rachel Dikul Baker, vehivavy Yolŋu avy amin'ny Faritany Avaratra ao Aostralia, mandresy lahatra mba hisiana anaran-tsehatra aterineto vaovao mampiasa ny teniny Yolŋu Matha ary ahitàna taratra ny filôzôfia Yolŋu momba ny rafi-pifampikasohana — andiana fitsipika ara-kolontsaina ianaran'ny ankizy ny fifandraisan-dry zareo manokana amin'ireo Yolŋu hafa tsirairay avy, sy amin'ireo singa marobe anatin'ny tontolo voajanahary.
“Ny rafi-pifampikasohana Yolŋu dia fifandraisana iray amin'ny tany, fifandraisana iray amin'ireo izay ao anatin'ny tany, tafiditra amin'izany ny olombelona sy ny fiteny,” hoy izy. “Betsaka ny fitrangàn'ny fahatapahan'ny fifandraisana satria tsy voavadika ho amin'ny fiteny Yolŋulized ireo anaran-tsehatra anaty aterineto; araka izany, tsy voatefy hanaraka ny rafi-pifampikasohana Yolŋu ny fianarana ilay fiteny ety anaty aterineto.” Ao anatin'ny fikambanany, ARDS Aboriginal Corporation, manampy izy amin'ny fandrafetana “sehatra iray amin'ny fiteny Warami izay mifototra amin'ny rafi-pifampikasohana,” hoy izy.
Ireo indizeny mpikatroka ho an'ny fiteny avy any Meksika sy Aostralia nifampizara tetikady nandritra ny fifampiresahana an-tambajotra niarahan'ny Global Voices sy ny First Languages Australia nikarakara, niaraka tamin'ny fanohanan'ny Masoivohon'i Aostralia ao Meksika, 13 Jolay 2021.
Joaquín kosa dia manonofy rindrambaiko maimaimpoana sy tambajotra sôsialy malalaka, noforonin'ireo vahoaka indizeny sy natao ho azy ireo, amin'ny fiteniny. Ankoatry ny ady sisika ataony mba hisian'ny rindrambaiko maimaimpoana, i Joaquín dia niaraka nanorina sy miasa ho ana hetsika santatra marobe natao hanapariahana ny fampiasàna ny fiteny Xhidza. Fankafizana roa hitany fa nitambatra mba hamorona habaka vaovao ety anaty aterineto.
Tiany ny hahita fihitaran'ny tambajotra iray misy ireo mpikatroka nomerika miasa hampivoatra ny fifandraisana amin'ny aterineto any amin'ireo vondrompiarahamonina izay zara raha misy fahafahana miditra amin'ny tontolo nomerika, nefa koa mampiroborobo ny “aterineto mitodika amin'ny vondrompiarahamonina” indizeny mba hizaràna ny vaovao.
“Azontsika atao ny mamorona ny tambajotra sôsialintsika manokana any anivon'ireo vondrompiarahamonina [indizeny] ary manome fitenanana ho an'olona maro kokoa; Afaka isika mamorona tambajotra aterineto hafa misy votoaty bebe kokoa amin'ny fitenintsika,” hoy izy.
María Lilia Hau Ucan, mpiteny Maya, avy any Kinil, Yucatán, Meksika, naneho fanantenana hahita tanora any Yucatán haneho ny heviny amin'ny fomba feno famoronana, ary amin'ny fitenin-dry zareo indizeny amin'ny alàlan'ny hira, tononkalo sy endrika hafa fitantaràna.
“Itompoan-dry zareo ilay fiteny rehefa manoratra izy ireo, zavatra iray maharavo. Misy ihany koa ireo andian-tanora izay mirotsaka an-tsehatra anatina fampielezampeom-piarahamonina, fandefasana fandaharana fahitalavitra, fanoratana gazetiboky, anaty tambajotra sôsialy… andraman-dry zareo mihitsy aza ny mampita ilay fiteny amin'ny alàlan'ny fampiasàna ny TikToks ho fampianarana azy.”
Ohatra, ao Amerika Latina, misy kaonty TikTok maromaro hianarana ny Nahuat avy any El Salvador, Maya Kaqchikel avy any Meksika sy Goatemalà, Kichwa avy any Ekoatora, ary ny Waorani avy any amin'ny faritra Amazônia ao Ekoatora. Amin'ny ankapobeny, niroborobo be tokoa ao amin'ilay sehatra ireo “TikTok Zanatany“, toerana izaràn'ireo tanora ny kolontsaina, ny vazivazy indizeny, ary ireo fitakiana momba ny zon'ireo Indizeny sy ny zo momba ny Tany. Misy ihany koa ireo fampiasa hianarana ireo fiteny indizeny ao Meksika sy Aostralia.
Fomba iray hafa izaràn'ireo tanora indizeny ny teniny ny mozika. Baker Boy , mpiangaly gadona Rap, dia mihira rap amin'ny tenindreniny, Yolŋu Matha, sy amin'ny teny anglisy, ao anatin'ilay hirany Meditjin, manasongadina an'i JessB:
Ilay vehivavy mpihira, Sara Curruchich, avy any Goatemalà, dia mihira amin'ny tenindreniny Maya Kaqchikel sy Espaniôla. Mpitolona ho an'ny zon'olombelona sy ny fiteny ihany koa izy, manandratra ny fiteny indizeny amin'ny alàlan'ny mozika. Tamin'ny 2020, nanangana lisitra iray tao amin'ny Spotify izy nanasongadinany ireo vehivavy indizeny avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, nomeny anarana hoe Voces de Mujeres Indígenas IXOQI.
“Zo maha-olona ho an'ireo vahoaka teratany ny miteny ny teniny, ny maneho hevitra, ny mifandray sy tsy mahatsapa henatra rehefa miteny azy,” hoy i Isela Xospa.
Afaka jerenao ny rakipeon'ilay resadresaka an-tambajotra “Indigenous+Digital: Ny fomba anomezan'ireo tanora aina vao ny tenindrazany ao amin'ny aterineto” (Espaniôla).